Talata 01 Janoary 2019. – FJKM
Talata 01 Janoary 2019.
Tonga Izy ka nitory teny soa mahafaly milaza fihavanana . Efes 2.17
Andriamanitry ny fiadanana anie ho aminareo rehetra . Rom 15. 33
Tratry ny taona , mirary soa
Araka ny fanao dia marobe ny hafatra ifampiarahabana hoe : « tratry ny taona » ifanaovan’ny mpihavana , mpinamana, mpiara-miasa, mpiara-monina raha vao manomboka ny taona .An-tapitrisany ny hafatra ampitaina amin ‘ny alalan’ny finday ary misy foibe internet manolotra fomba firariantsoa hafakely mba hahazoan’ny olona tsirairay mirary « zava-tsoa » ho an’ny tapaka sy namana , ho amin ‘ny fiainany ho avy, na dia mety tsy tena mino izany tanteraka akory aza izy .
Ny Baiboly kosa dia mitondra hafatra manambara zavatra tsara sy azo antoka ho an’ireo rehetra manaiky handray izany :
Ny vaovao mahafaly momba ny nahaterahan’ny Mpamonjy dia i Jesosy Kristy (Lioka 2.10). Andriamanitra dia tonga olona teo anivon’ny olombelona . Zava-dehibe fototra ho an’ny fahasambarantsika izany tranga izany .
Ny vaovao mahafaly milaza fihavanana (Rom 5.1, Efes 2.17) . Azo antoka ny fihavanana amin’ Andriamanitra ho an’izay mino ny asa nataon’i Jesoa Kristy izay maty teo amin’ny hazo fijaliana mba ho famelana ny fahotan’ny io olona mino io . Ambonin’izany ny fiadanana anaty dia mitoetra ao anatin’izay manankina ny fiainany amin’ny Mpamonjiny.
Ny fanantenana tsara ( 2 Tes 2.16) , ho an’ny mpino tsirairay , dia ny fanomezan-toky momba ny any ankoatra feno voninahitra , ao am-paradisan’ Andriamanitra miaraka amin’i Jesoa (Lioka 23.43).
Mandraka ankehitriny ny olona mitoky amin’ Andriamanitra dia toy ny hazo ambolena eo amoron-drano , tsy hitsahatra hamoa na dia mandalo toe-javatra sarotra aza (Jer 17.7-8). Ataon’ Andriamanitra hitondra soa ho azy ny zavatra rehetra (Sal 57.2). Noho izany dia afaka hiatrika am-pilaminana ny zava-tsy fantatra entin’ny taona vaovao eo am-piandrasana an’i Jesoa izay mbola hiverina indray .
« Ilay voa tsara nafafy »